Windows7Sp1 Apple Edition 2013 (x86/Eng/July2013) |3Gb ( 21 ဖိုင် ) | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Windows7Sp1 Apple Edition 2013 (x86/Eng/July2013) |3Gb ( 21 ဖိုင် )
Posted on November 10, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	သူငယ်ချင်းတို့အတွက် July.2013 ကထွက်လာတဲ့ Windows7Sp1 Apple Edition 2013 လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်လန်းတယ်ဆိုတာအောက်မှာပုံလေးတွေပြထားပါတယ်။ Windows7appleဒီဇိုင်းလေးပါ။ သင်းဒိုးတင်ပြီး အသံအတွက်ဘာမှပူစရာမလိုပါဘူး ။ Audio Driver ပါပြီးသားပါ။ ဘာ Activator မှသုံးစရာမလိုဘူး ။ Active ဖြစ်ပြီးသား။၀င်းဒိုးတင်ပြီး အသင့်ထည့်နိုင်ဖို့ အသုံးဝင်ဆော့စ်ဝဲတွေလည်း ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ထားပါတယ်။နောက်ခံ… Themes :– Osama Star– Apple Edition– Nature– WRDE OS– Angry Birds– Selv1– Transformer စသည်ဖြင့်နောက်ခံ ပုံဒီဇိုင်းတွေကိုလည်း 10 စက္ကန့်တစ်ခါအော်တိုပြောင်းပေးနေမှာပါ။မိမိကြိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းအုပ်စုလိုက် Theme တွေခေါ်ယူသုံးဆွဲလို့ရပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 3Gb ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖိုင်တွေကို တစ်ဖိုင်လျှင် 150 နှုန်းနဲ့ ဖိုင်ပေါင်း 21 ဖိုင်ခွဲပေးထားပါတယ်။ ဖိုင်အားလုံးကိုဒေါင်းပြီးဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲဆိုတာရယ်။ Theme အသစ်တွေကို ဘယ်လို ထည့်ရမယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်ဖိုင်ထဲမှာ ပုံတွေရှင်းပြထားတာပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘာသာစကားကိုမိမိကြိုက်ရာပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။(မြန်မာလိုအတွက်လုပ်နေတုန်းပါ)
Windows7Sp1 Apple Edition 2013 (x86/Eng/July2013) |3Gb Windows7apple windows 2013 is already in your living modified burning and preactivated.Once you install windows7apple will bealot of themes and software features.In Version :
Themes :– Osama Star– Apple Edition– Nature– WRDE OS– Angry Birds– Selv1– Transformer– More,,
And More Aplication
Free space on hard drive: 16 GB (GB) for the 32-bit version or 20 GB for 64-bit version.
Graphics: the graphics device Microsoft DirectX9withaWDDM driver.
To gain access to the Store Windows to download and run applications that require an active internet connection andascreen resolution of at least 1024 x 768 pixels.
To bind the application requiresaminimum screen resolution of 1366 x 768 pixels.
Internet access (fees may be charged by your ISP).
Name : Windows7Sp1Version : Apple Edition 2013Languange : EnglishMedicine : Include-PreActivatedOS Support : Windows 7Password : NoType File : RarCode File : 4pll3.2013Updated : 18 Juli 2013Publisher : Microsoft/ModifSize :3Gb
Windows7Sp1 Apple Edition Part 1 Windows7Sp1 Apple Edition Part2
Windows7Sp1 Apple Edition Part3Windows7Sp1 Apple Edition Part4
Windows7Sp1 Apple Edition Part5Windows7Sp1 Apple Edition Part 6
Windows7Sp1 Apple Edition Part7Windows7Sp1 Apple Edition Part 8
Windows7Sp1 Apple Edition Part9Windows7Sp1 Apple Edition Part 10
Windows7Sp1 Apple Edition Part 11 Windows7Sp1 Apple Edition Part 12
Windows7Sp1 Apple Edition Part 13 Windows7Sp1 Apple Edition Part 14
Windows7Sp1 Apple Edition Part 15 Windows7Sp1 Apple Edition Part 16
Windows7Sp1 Apple Edition Part 17 Windows7Sp1 Apple Edition Part 18
Windows7Sp1 Apple Edition Part 19 Windows7Sp1 Apple Edition Part 20
Windows7Sp1 Apple Edition Part 21 ဖိုင်ဖြည်နည်းနဲ့ Theme ထည့်နည်း နှင့် ISO Software (17Mb)
၀င်းဒိုးတင်ပြီးအသင့်သုံး Software များ
1) EMail ကိုအကောင်းဆုံးလုံးချုံအောင် ကာကွယ်နည်း။2) Skype ကိုမြန်မာလိုကောင်းစွာအသုံးပြုနည်း။3) Facebook ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုတတ်အောင်လေ့လာနည်း။4) Gmail & Gtalk ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးနည်း နှင့် အသုံးချနည်းများ။
2. Myanmar Fonts All in One ( 400 in 1 ) 3. Windows7Loader For (32bit / 64bit ) 4. 7zip Windows (32bit) 5. 7zip Windows (64bit) 6. ESED-NOD32 Antivirus (All Windows) 7. Firefox 26 Beta 1 8. Flashplayer 11-9 9. FoxitReader10.GoogleTalk (GTalk)11.I-Dictionary 5ဘာသာကိုမြန်မာဘာသာပြန်နိုင်သော (5 in 1 )12.Internet Download Manager 1.18 Build4+ Patch13.Netframe 3.5 (I-Dictionary သုံးသူများNetframe 3.5 ကိုအရင် အင်စတောလုပ်ပါ )14.Teamviewer 8.1.015.VLC-Windows (32bit)16.VLC-Windows (64bit)17.Window Media Player 1118.ZawGyiFont For Windows7(32bit)19.ZawGyiFont For Windows7(64bit) 20.ZawGyiFont For Windows XP (32/64bit)21.WinRar (32bit)22.WinRar (64bit) ကျွန်တော်တင်သောဆော့စ်ဝဲများသည် Website Malware Scanner နဲ့စစ်ပြီးထားသောကြောင့်စိတ်ချစွာနဲ့ဒေါင်းလော့စ်ချနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Security report (No threats found) ဒေါင်းနည်းများမသိပါက ဒီမှာ သွားကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ အဆင်ပြေရင် ဆိုဒ်က ကြော်ငြာများကို တစ်ချက်လောက်နှိပ်သွားပါအုံးခင်ဗျာ
This entry was posted in Windows အခွေများ. Bookmark the permalink.
← Zaw gyi မြန်မာဖောင့် Version 4.3အထိပါ။ rootလုပ်စရာမလိုဘဲထည်နိုင်ပါတယ်။	ချစ်သူ၏ သာယာချိုမြသော ဖုန်းအတွင်းမှ အသံလေး ကို အမှတ်တရသိမ်းထားချင်သူတွေအတွက် →